mercredi, 03 juillet 2019 11:54
Antsirabe: Mampiantrano atrikasa fakan-kevitra hanavaozana ny lalàna mifehy ny serasera
Tanterahina ao amin’ny lapan’ny Faritra Vakinankatra amin’ity alarobia 3 jolay ity, ny fihaonana fakan-kevitra isam-paritra hanavaozana ny lalàna mifehy ny serasera, izay tarihin’ny Ministeran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, hanolorana tolo-dalàna vaovao eo anivon’ny Antenimieram-pirenena.
Mandray anjara amin’izany ny solontena mpisehatra amin’ny asa fanaovan-gazety sy serasera avy amin’ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Itasy, Bongolava ary Menabe. Tsy nahatonga solontena ny avy any Melaky. Mitarika ny fakan-kevitra aty an-toerana ny Tale jeneralin’ny serasera, Fanahimanana Tiaray, sy ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety, Rakotonirina Gérard.
Hisy ny atrikasa hatao amin’ny faran’ity volana Jolay ity mba hanambarana ireo hevitra rehetra nivoitra nandritra ny fakan-kevitra isam-paritra, hahafahana manolotra tolo-dalàna eny amin’ny Antenimieram-pirenena.
mercredi, 03 juillet 2019 11:53
Kitra - Copa America: Resin’i Brezila 2 noho 0 i Arzantina
Tafita hiatrika ny lalao famaranana amin’ny « Copa America » i Brezila an-dry Thiago Silva, rehefa nandresy an’i Arzantina an-dry Lionel Messi, teo amin’ny manasa-dalana natao halina, tamin’ny isa 2 noho 0. Baolina matin’i Gabriel Jesus teo amin’ny minitra faha-19 sy Roberto Firmino teo amin’ny faha-71.
Izay mandresy amin’ny Chili sy Pérou, lalao manasa-dalana faharoa ao Porto Alegre anio alina, no hifandona amin’ny Seleçao Brezila amin’ny famaranana, izay hatao ao amin’ny kianjan’i Maracana, ao Rio de Janeiro, amin’ny alahady 7 jolay 2019 izao.
mercredi, 03 juillet 2019 11:32
mercredi, 03 juillet 2019 10:37
Clotilde Razanajoelina: Renin'ny Barea
Izy no Clotilde Razanajoelina namorona ny anaran’ny ekipam-pirenena baolina kitra Barea.
« Barea » na « Baria », izay karazan’omby gasy any amin’ny faritr’i Marambitsy, Melaky, no narosony tamin'ny fifaninanana nampanaovin’ny fedarasiona malagasy ny baolina (FMF) kitra tamin’ny 2005, fony Ahmad no filohany, hasolo ny « Scorpion » niantsoana ny ekipam-pirenena tamin’izany, Ka nahazoany loka voalohany, 500 000 Ariary tamin’izany ary nitondrana azy fiaramanidina hiakatra an'Antananarivo hakany ny loka.
Mpampianatra teny anglisy, mbola amperinasa, ao amin’ny CEG Charles Renel, Mahajanga, i Razanajoelina Clotilde.
60 taona amin'ny volana oktobra i Clotilde, manan-janaka roa mianadahy izy, professeur certifié en anglais ihany koa ny iray, ary manan-jafikely 2, ary eo ampiandrasana ny zafikely fahatelo ao amin'ny hopitaly izy izao.
mercredi, 03 juillet 2019 10:36
Kitra – CAN 2019: Sambany tafakatra ampahavalon-dalana i Bénin
Fety be tao Cotonou renivohitr’i Bénin amin’ny nahatafakatra ny « Écureuils », ekipam-pirenen’i Bénin amin’ny baolina kitra, eo amin’ny dingan’ny ampahavalon-dalana amin’ny fiadiana ny Amboaran’i Afrika.
Efa in’efatra tonga amin’ny dingana famaranana amin’ny CAN ny « Écureuils » fa sambany tamin’ity vao tafavoaka tamin’ny vondrona nisy azy, ka tonga amin’ny ampahavalon-dalana, taorian’ny nanaovany ady sahala tamin’i Cameroun, izay tompon’ny Amboara farany, tamin’ny lalao natao halina.
Iray amin’ireo ekipa efatra, laharana fahatelo tao amin’ny vondrona nisy azy avy na « meilleur troisième » i Bénin.
Hifandona amin’ny « Lions de L’Atlas » an’i Maroc ny « Écureuils » an’i Bénin amin’ny ampahavalon-dalana, hatao ny zoma 5 jolay izao.
mercredi, 03 juillet 2019 08:38
Barea: Razanajoelina Clotilde no namorona io anaran’ny ekipam-pirenena baolina kitra io
Fifaninanana nampanaovin’ny fedarasiona malagasy ny baolina (FMF) kitra tamin’ny 2005, fony Ahmad no filohany, hasolo ny « Scorpion » niantsoana ny ekipam-pirenena tamin’izany no nampisongadina an-dRazanajoelina Clotilde tamin’ireo mpifaninana maro nanerana ny Nosy.
« Barea » na « Baria », izay karazan’omby gasy any amin’ny faritr’i Marambitsy, Melaky, no narosony nifaninanana ka nahazoany loka voalohany, 500 000 Ariary tamin’izany. Niantohana ny fiaramanidina nitondrana an-dRazanajoelina Clotilde avy any Mahajanga niakatra tao Antananarivo tamin’ny fanambarana ny vokatry ny fifaninanana sy nanolorana ny loka.
mercredi, 03 juillet 2019 08:37